I-Semalt: Amathiphu Okuthinta Ngendlela Yokukhipha I-Agent Python Agent Ku-Windows OS Yakho
I-Python iyi-virus ebulalayo efaka ikhompyutha kumakhompiyutha wokugcina ngaphandleimvume yomnikazi. Worm.Python.Agent ungowomndeni obulalayo womndeni weThrojani. I-Python Agent ithathwa njengegciwane elibulalayonjengoba kuvumela ezinye i-malware ukuba ingene kukhompyutha yakho emva kokuthatha ukulawula okugcwele. I-python virus ingakwazi ukunciphisa ukusebenza okujwayelekilekwikhompyutha yakho.
I-Worm.Python.Agciwane le-Agent iqoqa idatha yakho ebalulekile futhi iyishintsha ukuzeAbaduni bangathatha kalula ukulawula okugcwele kwe-PC yakho ngokuthula ngaphandle kwemvume yakho. Ukuphequlula kwi-intanethi ngaphandle kwe-anti-virus esebenzayokuyingozi kakhulu. Abasebenzisi bekhompyutha abavame ukulanda isofthiwe yamahhala bayabungozi bokufaka leli gciwane. I-Python Agent iyingoziigciwane elibuye liguqule izilungiselelo zakho zokuphequlula ngokushintsha ukuhlela kwangempela. Ngemva kokulawula isiphequluli sakho, igciwane le-Pythoniqondisa umsebenzisi wekhompyutha ekhasini elibi.
uJulia Vashneva, iMenenja yeMpumelelo yabaMakhasimende aphezulu Semalt ,ichaza ngezizathu zokutheleleka kwe-Python Agent nokuthi ungayilahla kanjani.
Ukufaka i-Python virus kukhompyutha yakho ikukukhombisa kubaduni abanonya abangakwazithola ukufinyelela kwezintandokazi zakho ze-intanethi, amaphasiwedi we-akhawunti, kanye nedatha yasebhange inthanethi. Umthelela wengozi wale gciwane uphezulu kakhulu.Worm.Python.Agent isakaza ngekhompyutha yakho ngezindlela ezilandelayo:
Ukulanda isofthiwe yamahhala emakethe.
Ukuxhuma ikhompyutha yakho nama-USB anegciwane nezinye izingosi zokugcina.
Ukuchofoza ama-pop-ups angalungile uma ushaya.
Indlela yokuvimbela i-PC yakho ekubeni ne-Worm..Igciwane le-Python.Agent
Gwema ukuchofoza ama-pop-ups uma ushaya.
Njalo sebenzisa indlela yokufaka ngokwezifiso lapho ufaka isofthiwe elayishiwe.
Ukufaka i-premium anti-virus ku-PC yakho.
Ukususa i-Python Agent kusuka ku-PC yakho usebenzisa indlela yokusebenzisa
Worm.Python.Agent ingasuswa kukhompyutha yakho ngesandla ngokushintsha uhleloizilungiselelo zefolda ukuze ufinyelele amafayela afihliwe futhi obhalisiwe ku-PC yakho. Chofoza inkinobho ethi 'Hlela' bese uchofoza ifolda ngokubhalisa okufihliweamafayela. Chofoza okuthi 'Ok' ukususa amafayela wokubhalisa futhi usebenzise izinguquko.
Ukususa igciwane le-Python Agent kusuka ku-Windows OS yakho
Awudingi ukwesaba uma uthola ikhompyutha yakho igciwane yi-Worm.Python.Agentigciwane. Chofoza inkinobho ethi 'Qala Imenyu' bese ukhetha zonke izinhlelo zokusebenza ezifakiwe kwikhompyutha yakho. Khipha zonke izinhlelo ezinonya njenge-Pythonigciwane efakwe kukhompyutha yakho ngokuchofoza inkinobho 'Khipha noma ushintshe uhlelo' elingaphansi kwePhaneli Yokulawula.
Ukukhipha i-Worm.Python.Agciwane le-Agent kusuka kusiphequluli sakho
Ukukhipha izinhlelo ezinonya ezilawula umlando wakho wokuphequlula, iya ku-Isiphequluli se-Chrome bese ukhetha 'Imenyu'. Yiya kuzilungiselelo eziphambili bese uchofoze isandiso. Chofoza 'isithonjana sodoti' ngaphansi kwezandiso futhichofoza inkinobho ethi 'Susa'. Kubasebenzisi bekhompyutha usebenzisa i-Internet Explorer, khetha inketho ethi 'Phatha isikhangiso' bese uchofoza inkinobho 'Amathuluzi'. Khetha'Ama-Toolbar neZandiso' futhi ufune igciwane le-Python. Chofoza okuthi 'Susa' ukususa unomphela igciwane kusuka kukhompyutha yakho.
Worm.Python.Agent iyigciwane elibulalayo elilawula ukuphathwa kwekhompyutha yakhonomlando wokuphequlula. Emva kokufakwa kwikhompyutha yakho, igciwane le-Python liqoqa idatha yakho efanele futhi likwabelana ngolwazi naloabaduni abanonya abazuzisa wena. Ukuvimbela leli gciwane ukuthi lingathinti i-PC yakho, njalo ubuyekeze igciwane lakho eliphikisayo futhi lihleliweizikrini ezihleliwe ukuthola nokuvimbela noma yiluphi uhlelo olubi lokutheleleka kukhompyutha yakho.